Rapatsalahy Paul (Idealy-Soa) : hosokafana ny mozea tsy miankina roa | NewsMada
Tafatsangana ny komity mpikarakara ny fankalazana ny faha-100 taon-dRapatsalahy Paul na Idealy-Soa, mpanao gazety sady mpanoratra. Anisan’ny vaovao nisongadina nandritra ny velakevitra nataon’ity komity ity niaraka tamin’ny fianakaviany, omaly, ny fampahafantarana fa hosokafana etsy Antanimena (Tranobe SBM ampitan’ny Victoria Plazza) ny Mozean’ny Haisoratra «Paul Rapatsalahy». Hirakitra ny tantaran-dRapatsalahy Paul, ny zavatra vitany, ireo olona niara-niasa taminy ka hotokanana ny 17 febroary izao. mila fangattahana alalana mialoha ny fitsidihana azy.
Ny mozea faharoa, Mozea tsy miankina « Paul Rapatsalahy » eny Imerinafovoany Talatamaty. Hahitana ny tantaran’i Madagasikara talohan’ny fahampanjaka hatraty amin’ny nahafatesan-dRapatsalahy Paul (taona 1988). Hosokafana indray ny 16 avrily izao.
Ankoatra ireo tsangambato roa lehibe ireo, hisy ny velakevitra ny 3 marsa eny amin’ny Akademia malagasy Tsimbazaza. Hatonta indray ireo sanganasan’i Idealy-Soa sy Idealy-Soa Zanany. Ny 14 febroary ny fanokafana ny fankalazana amin’ny alalan’ny lamesa fahatsiarovana etsy amin’ny Ekar Faravohitra.